Kia Sorento 2014 (#673317) ကို Mahaaungmyay မြို့နယ်တွင်ေ... | CarsDB
4981 total views, 10 today
Lot Number: #673317
50% Down Payment ပေးချေနိုင်ရုံဖြင့်2နှစ်အထိ HP ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
အမြင့်ကား Off Road လေးလည်း စီးချင်တယ် Luxury ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကားလေးလည်း စီးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ KIA Sorento Second Generation ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် 2014 လေးသာ ဝယ်စီးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Safety ပိုင်းမှာလည်း5Stars အပြည့်ရထားတဲ့ with six airbags andafull suite of safety systems includingareversing camera. လေးနဲ့ဗျာ။ Engine 2.2-litre turbocharged four-cylinder diesel ကို6Speed Auto/Manual transmission၊
LCD display in place of usual analogue speedometer, and Parallel Park Assist System (PPAS) with Front & Rear Parking Sensors. Panoramic Roof နဲ့ ပစ္စည်းစုံ ကားကောင်းလေးမို့ အမြန်ဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
ီDetail in KIA Sorento (Ref; Internet)
2014 Kia Sorento 2.2L turbo-diesel AWD
Drive on-demand all-wheel drive with central-lock feature
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Khaing Thin Zaw မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Kia Sorento 2014 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။